Negesi giant isimiso sethu sikanozungezilanga, njenganoma iyiphi enye, ingxenye enkulu aqukethe amagesi. Ubunjalo bomuntu kanye amakhemikhali la maplanethi zihluke kakhulu yini imvelo yethu engakwazi kodwa sivuse isithakazelo ngisho nalabo kude kakhulu zisuswe bokufundwa.
Kuyaziwa ukuthi uhlelo inkanyezi yethu izinto zihlukaniswe amaqembu amabili: umhlaba kanye negesi. Iplanethi yesibili zibandakanya ungayembethe igobolondo kanzima. Inkanyezi yethu lelinetintfo ezine kanje:
Negesi imidondoshiya izinhlelo lelanga imingcele engaqinisekile phakathi nengaphakathi igobolondo futhi emkhathini we iplanethi. Empeleni, ngisho ngokuqiniseka etholakalayo ngaphandle ososayensi core.
Ngokusho ukubukeka kungenzeka iningi inqubo yethu yezwe, imidondoshiya igesi sonozungezilanga uvele ngemva kweminyaka eminingi kwabhalwa amaplanethi eliwumhlaba. Ingcindezi emkhathini kwandisa njengoba ekhosombeni giant. Izazi zikholelwa ukuthi ukusebenzisa eduze maphakathi planethi okukhulu kangangokuthi hydrogen phakathi ewuketshezi.
emizimbeni negesi uphendukisa emhlabeni axis awo ngokushesha kunokuba okuqinile. Okuxakayo ukuthi la iplanethi (giant igesi) Solar System zikhipha ukushisa ezingaphezu kuka elamukelayo lusuka ukukhanya. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kungenziwa ngokwengxenye achaza ngu amandla adonsela phansi, kodwa umsuka okusele kwenziwe usosayensi kuze kube sekupheleni, akucacile.
Iplanethi ngobukhulu esimisweni sonozungezilanga - giant igesi Jupiter. Kuhle ukuze ukwazi ukukubona ngeso lenyama - entweni ebusuku isibhakabhaka bhá lwesithathu, ebonakalayo nje Moon futhi Venus. Ngisho isibonakude encane ungabona disk Jupiter sika nge amaphuzu amane - iziphuphutheki.
Planet inama hhayi kuphela ngobukhulu ngobukhulu, kodwa futhi namandla amakhulu kazibuthe - ke kukhulu kunenani izikhathi Earth 14. Kukholakala ukuthi wadalwa ukunyakaza hydrogen metallic ku emathunjini yiRefa. Radio ekushayweni kusukela iplanethi sinamandla kangangokuba umonakalo noma iyiphi amayunithi eduze efanelekayo.
Naphezu omkhulu Usayizi Jupiter, kwakwenziwa ngokushesha konke inkanyezi uhlelo ayekanye nawo - ukwelashwa okuphelele kuthatha amahora 10 kuphela. Kodwa ngaphakathi wo orbit omkhulu kangangokuthi azungeza emhlabeni ukukhanya kuthatha 12 Umhlaba iminyaka.
Jupiter - igesi giant abaseduze nathi, ngakho-ke is the wafunda kakhulu phakathi amaplanethi leqembu. Kuyinto kule umzimba wathunyelwa mkhathi kakhulu. Okwamanje ukulokho probe "Juno", okuyinto ebutha ulwazi mayelana iplanethi kanye iziphuphutheki yayo. Lo mkhumbi wethulwa 2011, ngoJulayi 2016, wawufinyelela orbit kule planethi. Ngo-August wangonyaka efanayo wandizisa eduze ngangokunokwenzeka - ukuqoqa Jupiter amakhilomitha 4200 nje ebusweni. Ngo-February 2018 sihlelwe izikhukhula zedivayisi emkhathini likaGoliyathi. Izifinyezo yenqubo ulinde umhlaba wonke.
Le gesi giant ngobukhulu System Solar - Saturn. Leplanethi kubhekwa oluyimfihlakalo kunalo lonke, ngenxa izindandatho yayo, umsuka zazo phikisana ososayensi emhlabeni wonke. Namuhla yaziwa ukuthi aqukethe izingcezu ezahlukene obujwayelekile rock, ice nothuli. Kukhona izinhlayiya nge Ucezwana ngothuli, kodwa kukhona izinto of kuze ikhilomitha ububanzi. Kwenzeka inqaba, ububanzi izindandatho kungaba okwanele ukuya kubo kusukela Earth the Moon, kuyilapho ububanzi ikhilomitha cishe ingxenye eyodwa kuphela.
Ukukhanya kubonakala into lidlule inani kuvezwa emhlabeni. Ngisho hhayi isibonakude esinamandla kakhulu kuyoba okwanele ukuze ubone emasongweni Saturn.
Ososayensi bathole ukuthi le kwabantu planethi incane izikhathi ezimbili kunalokho yamanzi, uma kungenzeka ukuzigcina Saturn emanzini, yena ayeyohlala ingaziki.
Ngo imimoya ephezulu kakhulu giant - vortices irekhodwe ku yenkabazwe zihamba ngesivinini esingamakhilomitha ka 1800 km / h. Ukwethula ezinye amandla abo, kufanele eziqhathanisa kunenkanyamba enamandla kakhulu, okuyinto isivinini sifinyelela 512 km / h.
usuku Saturn sika izimpukane ngokushesha - emahoreni angu 10 nje, imizuzu 14, kuyilapho ngonyaka ihlala 29 Umhlaba iminyaka.
Leplanethi ngokuthi ice giant njengoba ngaphansi isimo e-hydrogen, helium ne-methane zitholakala rocks nje kuphela kodwa futhi ephezulu lokushisa ukuguqulwa ice. Ososayensi baye bathola ifu hydrogen, i-ammonia ne ice yobuleza e Uranus emkhathini.
Planet inama enomoya ezisesimisweni sethu sikanozungezilanga umoya - lokususa 224 degrees. Ososayensi basikisela khona yamanzi giant lokho, kusenza sikwazi ukuphila.
Kuvele isici esithakazelisayo Uranus - ke amanga ngaphesheya yenkabazwe komzila wokuzungeza: iplanethi sengathi wabeka ezinsikeni zawo. Lesi simo kwenza kube noshintsho ngokuphelele eziyingqayizivele zonyaka. Izinti planethi eminyakeni yethu 42 ungayiboni elangeni. Kulula ukubala ukuthi kwaba nombhikisho ngokugcwele emhlabeni Sun, Uranus awenzela '84.
Ukujikeleza mayelana eksisi kwenzeka amahora 17. 14 imiz., Kodwa imimoya enamandla (kufika ku 2 m / s) ukusheshisa eminye imininingwane emkhathini, kubenze akhwela iplanethi emahoreni angu-14.
Ngaphambili kwakucatshangwa ukuthi ukuthambekela iplanethi ishintshile emva ukushayisana ngento enkulu, kodwa ososayensi namuhla sithambekele ukuthonya omakhelwane ohlelweni. Kusolwa ukuthi wangqongqoza-eksisi Uranus 'emasimini adonsela phansi-Saturn, i-Jupiter ne-Neptune.
Leplanethi ayengayicabangi ilanga, ngakho iningi ulwazi kusekelwe izibalo kanye nokuqapha akude.
A ngonyaka Neptune imayelana 165 Earth iminyaka. Isibhakabhaka ingahlalisekanga ukuze yenkabazwe planethi lumayelana eksisi e 18 amahora, izigxobo - 12, i-magnetic field - I-16.1.
Gravity giant nomthelela obalulekile izinto ise Kuiper ibhande. Kunobufakazi bokuthi i-iplanethi lufakwa aphume isinyathelo ezindaweni eziningana ibhande, futhi umphumela waba ukuthi kwakukhona izikhala oyiyo.
Neptune isikhungo lokushisa ifinyelela degrees 7,000 - kuyafana iningi amaplanethi eyaziwa noma ngaphezulu ukukhanya.
Negesi imidondoshiya sonozungezilanga anezici efanayo, kodwa kuhluke ngokuphelele kwezinye izinto, ngamunye okuyinto emfanele sazi ngazo ngangokunokwenzeka.
Black usayizi Sea: ukujula, ububanzi nobude
Ukuthuthukisa nezimfumbe zezibalo ngezimpendulo ezasenkulisa
Cell izwibela: Agent Double - Ukudlula namathiphu
Yokusetshenziswa "Suprema-ENT", incazelo ukulungiselela, ukubunjwa, Izimo kanye nokubuyekeza
Unodoli "Live": indlela yokwenza iphalishi for Baby Bon. Indlela anakekele ithoyizi